Hoggaanka Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya oo qabtay dhalinyaro Tahriib doonayay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hoggaanka Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya oo qabtay dhalinyaro Tahriib doonayay
MAREEG 21 April 2016
Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ayaa maanta laga qabtay 11 dhallinyaro ah oo doonayay in ay tahriibaan, kuwaas oo qorsheynayay in ay sii maraan dalka Kenya.
Taliyaha Hoggaanka Socdaalka Iyo Jinsiyadaha Soomaaliya Gen C.laahi Gaafoow, Ayaa Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed Ee SONNA u sheegay in ciidamada Amaanka garoonka ay qabteen 11 dhalinyara ah, iyagoo oo raba in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde.
“waxaa saakay qabanay 11 dhallinyaro ah waxa ay rabeen in ay kabaxaan garoonka aadan cadde kadibna dalka Kenya ay ka sii tahriibaan oo ay naftooda qatar galiyaan, hoggaankana arrintaan xil ayaa ka saaran mana ogolaan doono in dad tahriib u socda ay garoonka ka dhoofaan”ayuu yiri Gen Gaafoow.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ammar ka soo saartay dadka taahriibaya iyo kuwa Mukhalasiinta ah ee dadka tahriibiyo, iyadoo la qorsheynayo in ciidamo gaar ah loo sameeyo ka hortagga dhallinyarada tahriibeysa.
Dowlada Soomaaliya oo Abuureysa Ciidamo gaar ah oo kahor taga Shabakadaha…